အစွန်းရောက်ထေရဝါဒီ (၂) ( ဘုန်းကြီးရမ်းကားနှင့် နောက်လိုက် လူရမ်းကားများ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အစွန်းရောက်ထေရဝါဒီ (၂) ( ဘုန်းကြီးရမ်းကားနှင့် နောက်လိုက် လူရမ်းကားများ )
အစွန်းရောက်ထေရဝါဒီ (၂) ( ဘုန်းကြီးရမ်းကားနှင့် နောက်လိုက် လူရမ်းကားများ )
ယနေ့ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာလောကတွင် ရမ်းကားနေသော ဘုန်းကြီးများနှင့် အပေါင်းအပါ နောက်လိုက် လူရမ်းကားတို့၏ လုပ်ရပ်များကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်တို့မှာ စိတ်မချမ်းမြေ့မှုများဖြစ်နေကြရ၏။ တရားပွဲများနှင့် ဘာသာရေး စာစောင် တချို့( ဓမ္မရံသီနှင့် ဓမ္မရတနာ စာစောင်တို့ ကဲ့သို့)တွင် လည်းကောင်းတို့ အပေါင်းအပါတစ်စု၏ အယူသာလျင် ဘုရားဟောနှင့် ညီသည့် ထေရဝါဒီတွေဟု တရားသေ လှေနံဓါးထစ် ယူထား မှတ်ထားကြပြီး အယူမတူသူများကို သဘောထားသေးစွာဖြင့် ပုတ်ခတ်ဟောပြော၊ ရေးသား နေကြသည်တို့ကို တွေ့နေရပါသည်။ ဒါသည်ပင် ထေရဝါဒီ တို့၏ သာသနာ ပြုခြင်း လား – – – – – ။
ကိုးကားဟောပြောသည့် အဋ္ဌကထာ (အဖွင့်ကျမ်းများ)နှင့် ပါဠိ အဖွင့်အယူအဆ မတူကွဲပြားမှုတို့အပေါ် သဘောထားမကြီးနိုင်ကြပဲ ကိုယ့် ဖွင့်ဆိုတာမှအမှန်၊ ကိုယ့်အယူအဆမှ ဘုရားဟောအစစ်ဟု တသွင်သွင် ပြောကြကာ အဖွင့်အယူအဆ မတူကွဲပြားသူတို့ အပေါ်မှာ ဖိအားပေးနှိပ် ကွပ် စာတွေအတင်းဖြန့်ဝေသည့် (မေတ္တာတံခွန်အသင်းကဲ့သို့) စသည့် ရမ်းကားသူများရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကလည်း ထေရဝါဒီ တို့၏ သာသနာပြုခြင်း လား – – – – – ။
လူတိုင်းမှာ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့် ရှိပါတယ်။ မိမိအယူကိုပဲ ကိုးကွယ် စေချင်တာမို့ အခြားကိုးကွယ်မှုတွေ အပေါ်မှာ နှိပ်ကွပ်သည့် အိမ်တွင်း အုန်းကို ပြဿနာ ရှာ၊ ရိုးရာနတ်ကိုးကွယ်မှုတွေက်ို နှိမ့်ချ၊ ဘိုးတော်တွေကို ရန်စကားပြော၊ ခရစ်ယာန်က ဘယ်လို၊ အစ္စလာမ်က ဘယ်ပုံဆိုပြီး အတင်း ပြောပြီးမှ မိမိအယူသာ အမှန်ဟု ဇွတ်အတင်းဟောပြော၊ ရေးသားနေကြ သည့် သူများမကောင်းကြောင်း၊ ကိုယ်ကောင်းကြောင်း လုပ်ရပ်တွေက လည်းပဲ ထေရဝါဒီ တို့၏ သာသနာပြု ခြင်းလား – – – – – ။
နာမည်ကြီး ဓမ္မကထိကများဖြစ်ကြတဲ့ ( ဓမ္မစေတီဦးကောသလ္လ၊ ဦးသုမင်္ဂလ၊ မေတ္တာရှင် ဦးဇဝန စသည့်) တို့ကို သဘောထားသေးစွာ အပြစ်ရှာ ဝေဖန်ပြီး ကိုယ့်ကို လူစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်၊ ထေရဝါဒသာသနာတစ်ခုလုံးနှင့် မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်ကို ကိုယ်စားပြုတာမဟုတ်ပါပဲနဲ့ ထေရဝါဒစကားလုံး တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံး၊ မစိုးရိမ်ဆိုတဲ့ကျောင်းကြီးရဲ့ အရှိန်အဝါကို ယူ တရားဟော ပလ္လင်ပေါ် အတင်းတက်ပြီး အောက်လမ်းနည်းနဲ့ နာမည်ကြီးအောင်လုပ်နေတဲ့ (မစိုးရိမ်စာသင်သား အမည်ခံ ဦးဣဿာမစ္ဆရိယဘိလံသ စသည့်) ပုဂ္ဂိုလ် တွေရဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာလည်း ထေရဝါဒသာသနာပြုတာကော ဖြစ်ရဲ့လား။
စာရေးဆရာကြီး ပါရဂူ၊ ဦးအေးမောင် (ဗုဒ္ဓနှင့် ဗုဒ္ဓဝါဒ)စတဲ့ ဆရာကြီးတွေရဲ့ သုတေသနပြု ရေးသားချက်တွေအပေါ်မှာ ကိုယ်ဉာဏ်မမှီလို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အတွေး မရှင်းတာနဲ့ပဲ တစ်ဖတ်သတ်ပုတ်ခတ် မဲမဲမြင်ရာ ရမ်းပစ်သလို ရေးသား နေကြတဲ့ အသိ်ဉာဏ်ရောထွေးနေတဲ့ (ဦးကောဝိဒ – ယော မဟုတ်တဲ့ ရော စသည့် ) ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ရေးသာမှုတွေကလည်း ထေရဝါဒကို ကိုယ်စားပြု တယ်လို့ မှတ်ယူလို့ ရမှာလား။
မသူတော်ချင်းချင်း အသင်းလွေ့လွေ့ ပေါင်းဖက်တွေ့ဆိုသလိုပဲ အိုစမာဘင် လာဒင်လို အစွန်းရောက်ဝါဒီတွေမွေးထုတ်ပေးနေတဲ့ ဘုန်းကြီးရဟန်းတွေ အစုကွဲအောင် ရန်တိုက်ပေးနေသော၊ ဒကာအချင်းချင်းလည်းကွဲပြားအောင် သံဃဘေဒကကံ (သံဃာအစုကွဲစေတဲ့အလုပ်) တွေကို ရဲရဲကြီးကိုပဲ ကျူးလွန်ရဲနေကြ သော စာစောင်များထဲက (အ)ဓမ္မရံသီ စာစောင်ဖန်တီးရှင် ဦးလေးမြိုင် ကဲ့သို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရဲ့ အပါယ်ရောက်လောက်အောင် လေးလံလှသည့် လုပ်ရပ် တွေကလည်း ထေရဝါဒ ဆိုတဲ့အမည်ကို ဘယ်လိုပဲ သုံးသုံး ထေရဝါဒီ တို့၏ သာသနာပြုခြင်း ဖြစ်ပါ့မလား – – – – – ။
လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ကြတာနဲ့ လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲကြတဲ့ အပေါ်မှာ သဘောထားကြီးကြတာဟာ အသိဉာဏ်ကြီးသောသူတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပါပဲ။
ကိုယ်နဲ့ မတူ ကိုယ့်ရန်သူဆိုတဲ့ သဘောထားဆိုးတဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ ရမ်းကားတဲ့ မယဉ်ကျေးမှုတွေပါ။
လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲကြတဲ့အပေါ်မှာ သဘောထားကြီးပေးကြပါ။
စင်စစ်တော့ အထက်ပါလုပ်ရပ်များသည် ထေရဝါဒနာမည်ကို ဘယ်လိုပဲ သုံးသုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ တကယ့်ထေရဝါဒီတို့ရဲ့ သာသနာပြုနည်း မဟုတ်ပါပဲ
အိုစမာဘင်လာဒင်ရဲ့ အယ်လ်ကိုင်ဒါ များကဲ့သို့ အစွန်းရောက်ထေရဝါဒီတို့ရဲ့ အစွဲကြီးတဲ့ ရူးသွပ်မှုသာလျှင် ဖြစ်ပါသောကြောင့် ထိုသူတို့၏ အစွန်းရောက် လမ်းစဉ်များအား အစွဲဖြုတ်(အစွန်းချွတ်) ပေးကြနိုင်စေရန်အတွက် သုံးသပ် တင်ပြလိုက်ပါသည် တကယ့်ထေရဝါဒီ အို – – – သူတော်ကောင်း အပေါင်းတို့ – – – – – – – -။
( အိုးကရွဲ့နေလို့ စလောင်းကလေးက ရွဲ့လိ်ုက်တာပါ။ အိုးတွေ ပြန်တည့်နိုင်ကြစေဖို့ စလောင်းကလေးစောင့်နေပါတယ်။ )
အမလေးဗျာ….ဘာတွေလဲဗျာ…. ခက်တော့တာပဲဗျာ… တေရောဗျာ….
ထေရဝါဒ မှန်ရင် အစွန်းရောက်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုတာ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်တဲ့ ဘာသာ၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးရတဲ့ဘာသာပါ။ ဒါကြောင့် real men လဲ ထေရဝါဒဆိုရင် ကိုယ့်အလုပ်ပဲ ကိုယ်လုပ်နေပါ့လား…။သူများတွေ ဘာတွေပြောပြော သူများတွေ ဘာတွေ ုလုပ်လုပ် ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သူများကို အစွန်းရောက် အစွန်းရောက် အော်လွန်းအားကြိးရင် ကိုယ်ကို်ယ်တိုင်လဲ အစွန်းရောက်သွားတတ်ပါတယ်။
မငြင်းနှိုင်တဲ့ ဘုရားစကားတော် ကာလာမသုတ်လဲ အထင်အရှားရှိသားပဲဗျာ……
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ယုံကြည်မှ ဖြစ်မှာပါ။
မှန်ကန်တယ်။ ကျောက်ပြင်ကွဲတယ်။ ဘီးကျိုးတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောချင်တာက ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး လုပ်စားနေကြသူတွေရဲ့ လုပ်စားခြင်းခံရမှုက လွတ်ပါစေဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ရေး နေတဲ့ပုံရှိပါတယ်။ ကောင်းတော့ကောင်းသားဗျ။ ကိုယ့်ဘာသာကို ပြန်ပြီး သုံးသပ်နိုင်ဖို့အတွက် သုံးသပ်စရာတွေ တွေ့ရတာပေါ့။
ကျွန်တော် မိုးပြာအဖွဲ့ကပါ။ ကျွန်တော်ဆရာက မိုးပြာဦးညာနပါ။ ဆရာက ကျွန်တော်တို့ကို သာသနာပြုနည်း ဗျူဟာအသစ်တွေ သင်ပေးထားပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကို လူတွေ စိတ်ဝင်စားအောင် စကားလုံးအဆန်းတွေသုံးပါတဲ့။ ဥပမာမပေးဖူးတာတွေ ပေးပါ။ လူတွေဉာဏ်မမှီ ရှုပ်ထွေးစေမယ့် ယုံထင်ကြောင်ထင်ဖြစ်အောင် အတွေးအခေါ်တွေ သင်ပေးပါ။ မြန်မာတွေက သမိုင်းကို လေ့လာတာအားနည်းလို့ သမိုင်းကိုုအတွေးနဲ့ ဖြန့်ကျက်ပြီးမဟုတ်လဲ အဟုတ်ထင်အောင်ပြောပါ။ ဝိနည်း အဘိဓမ္မာ အဋ္ဌကထာ ဋီကာ ပါဌိတော်တွေကို ကျော်ပြီးပြောသင့်ရင်ပြောပါ။ ထေရဝါဒက ငါတို့ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဘူး ။ ငါတို့က ဒီရေဒီမြေမှာ မွေးတာမဟုတ်တော့ ငါတို့အပါ် ကျေးဇူးမရှိဘူး။ ငါ ညာနကသာ မင်းတို့ကို အညာအသိထွန်းပြတဲ့ဆရာမို့ တစ်ဆူတည်းသော ဆရာ ဗုဒ္ဓလို့မှတ်ကြပေါ့။ ဒီလိုဆရာသခင်ရဲ့ အညာလောင်းရိပ်မိခဲ့တော့ ကျွန်တော်မှာ တဖြေးဖြေးနဲ့ ညာရင်း ညာရင်းနဲ့ နနလာခဲ့တာ အခုဆို ဗုဒ္ဓဘာသာ တော်တော်ပျက်လောက်အောင် ကျေးဇူးများခဲ့တယ် မဟုတ်လား။ အသင်တို့လဲ ကျွန်တော်ဆရာ လောင်းရိပ်မိနေဦးမယ်။
တကယ့်ထေရဝါဒက အစွန်းမရောက်ပါဘူး။ ယနေ့ ထေရဝါဒကို ဖော်ဆောင်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချို့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေက အစွဲအားကြီးနေတော့ အစွန်းရောက်နေတယ်လို ဆိုလိုတာပါ။ ကာလာမသုတ်တော်အတိုင်းသာ ဆောင်ရွက်နေကြရင် ဒီ post ရေးစရာတောင်မလိုတော့ပါဘူး။
လူတိုင်းမှာ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့် ရှိပါတယ်။ မိမိအယူကိုပဲ ကိုးကွယ် စေချင်တာမို့ အခြားကိုးကွယ်မှုတွေ အပေါ်မှာ နှိပ်ကွပ်သည့် အိမ်တွင်း အုန်းကို ပြဿနာ ရှာ၊ ရိုးရာနတ်ကိုးကွယ်မှုတွေက်ို နှိမ့်ချ၊ ဘိုးတော်တွေကို ရန်စကားပြော၊
အဲလိုပြောထားတယ်နော်.. ကျနော်က ဘန္ဒဒ္ဒသုနန္ဒ(မိုးကုတ်ဆရာတော်တစ်ပါး) ဟောတဲ့တရားတွေကို နာဖူးပါတယ်.. များသောအားဖြင့်.. နတ်ကတော်၊ ဘိုးတော် တွေကို ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေက ..
ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပါ.. အဲဒါတွေဟာ.. ဒိဌိအယူ (အယူမှား) တွေလို့လည်းဟောကြားပါတယ်..
(မိုးကုတ်ဝိပသနာက .. တခြားစခန်းတွေတော့မပြောတတ်ဖူး ကျနော်တော့မိုးကုတ်ဆရာတော်တွေ ဟောတာပဲ များသောအားဖြင့် နာဖူးတာ )
ပြီးတော့မိုးကုတ်ဆရာတော်တွေဟောတာက.. အလှူအဒါန်းပြုဖို့ ဆိုတာထက်.. ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကြောင်း.. နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော်တွေ ပိုများပါတယ်.. နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ ဆိုတာ ဒိဌိပြုတ်ဖို့အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်.. အယူမမှားဖို့ပေါ့.. အဲဒါတွေကို ကိုးကွယ်နေကြတာဟာ.. အယူမှားမှာ သောင်တင်နေပါတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်.. ပြီးတော့ဆရာတော်တွေ .. အဲလိုပြစ်တင်ရှုံ့ချနေတာဟာ.. ကောင်းစေချင်လို့ပါ.. မှန်ပါတယ်..လူတိုင်းမိမိယုံကြည်ရာကို .. ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိပါတယ်..ဒါပေမယ့်.. ဒီသာသနာသက်တမ်းတိုတိုလေးမှာ.. တတ်နိုင်သမျှ.. အယူမှားတွေဖျောက်ဖို့ ပြောဆိုဆုံးမနေကြတာပါ..
ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဗျာ.. အားလုံးသိကြပြီးသားပါ .. ပုံဂံခေတ်တုန်းက … ရှင်အရဟံပုဂံကိုကြွမလာခင်..
ပုဂံပြည်မှာ.. အရည်းကြီးတွေ ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်..မင်္ဂလာဦးညမှာ သတို့သမီးကို..အဲ အရည်းကြိးတွေကို အရင်ဆက်ရပါတယ်.. တကယ်လို့သာ.. ရှင်အရဟံရောက်လာခဲ့ရင်.. အခုထိ ခင်ဗျားတို့လည်း ခင်ဗျားတို့ရဲ့ သတို့သမီးအသစ်စက်စက်လေးကို.. အရည်းကြီးဆိုတဲ့လူတွေဆီကို.ဆက်နေရဦးမှာပေါ့..
(ဒါက အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ကိုးကွယ်မှုပေါ့) .. အနော်ရထာမင်းက အဲအယူကိုဖျောက်ပီး . ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ် စေခဲ့လို့.. ကံကောင်းသွားကြတာပါ..
ပြီးတော့ထေရဝါဒဘာသာက .. အကြောင်းအကျိုးကိုဆင်ခြင်ရတဲ့အယူပါ..
အကြောင်းတရားမှန်သမျှ .. အကျိုးတရားနဲ့ကင်းတာမရှိပါဘူး..
အကြောင်းတရားကြောင့် ..အကျိုးတရားရှိတယ်ဆိုတာ ချည်းပါပဲ.. အဲလိုအကြောင်းအကျိုးမညီညွတ်တဲ့ နတ်ကတော်အယူတွေ.. ဘိုးတော်အယူတွေကို.. မကိုးကွယ်စေချင်တာ.. အဲလိုဟောတဲ့ ဆရာတော်တိုင်းရဲ့စေတနာပါ..
“””လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ကြတာနဲ့ လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲကြတဲ့ အပေါ်မှာ သဘောထားကြီးကြတာဟာ အသိဉာဏ်ကြီးသောသူတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပါပဲ။””
ဒါပေမယ့်နော်. နတ်ကိုးကွယ်မှု ကို ဘုရားကခွင့်မပြ ုဘူးနော်။ဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ။
ဗုဒ္ဓဘုရားက အလွန်သဘေားထားကြီးပါတယ်။ နတ်ကိုးကွယ်တာကို ဗုဒ္ဓက ခွင့်မပြုခဲ့တာလား။ နောက်လူတွေက (မလိုစိတ်ထားတွေနဲ့) ခွင့်မပြုစေချင်တာလားဆိုတာ ကွဲပြားဖို့ လိုပါတယ် မီးမီး။ ဗုဒ္ဓက သူ့ကို ကိုးကွယ်ရင် နတ်မကိုးကွယ်ရဘူးလို့ ဟောခဲ့လို့လား။
ဗလိနတ်စာကို မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကျွေးဖို့ အနာထပိဏ်သူဋ္ဌေးကို ဟောခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဘယ်လို နားလည်မလဲ။ သူ့ခေတ်သူ့အခါ လူတွေရဲ့ အားထားပုံတွေ၊ ကိုးကွယ်မှုတွေရဲ့ လွဲမှားနေပုံကို ဗုဒ္ဓက တည့်မတ်ပေးခဲ့တာလို့ နားလည်းပေးပါ။ သူ့(ဗုဒ္ဓ)ကိုပဲ ကိုးကွယ်၊ နတ်တွေကို မကိုးကွယ်ရဘူးလို့ မဟောခဲ့ပါဘူး။ တကယ်ကိုပဲ ဗုဒ္ဓက အားကိုး၊ ကိုးကွယ်စေချင်တာက အတ္တာဟိ အတ္တာနောနာထော(ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ အားထားကိုးကွယ်)တဲ့။
အမှန်ပဲခင်ဗျာ.. နတ်ကို ကိုးကွယ်စရာ မဟုတ်ဘူးလို့သိထားဖို့သာ အရေးကြီးတာပါ။ နတ်ကို ပြဿနာရှာ ရန်လုပ်ရမယ်လို့ ဘုရားရှင်က မဟောခဲ့ပါ။ ရတနာ့သုတ် ပရိတ်တော်မှာလဲ ဘုရားရှင်က သင်လူသားတို့က နတ်တို့ အပေါ်မှာ ပသမြဲကိစ္စကို လုပ်ပေးကြ (ကိုးကွယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါ၊ အစားအသောက်နဲ့ လှုခိုင်းတာပါ၊ ကောင်းမှု့ကုသိုလ်လုပ်၊ အမျှအတမ်းပေးဝေခိုင်းတာပါ။ အရက်တွေ ကြက်တွေနဲ့လဲ မလုပ်ကောင်းပါ)။ အသင်နတ်များကလည်း လူသားတို့ အပေါ် မေတ္တာနဲ့ ပြန်လည်စောင့်ရှောက်ကြလို့ ကျနော်တို့ ဘုရားရှင်က လူနဲ့ နတ်နဲ့ မေတ္တာ ဖက်ရအောင် ဆုံးမခဲ့တာပါ။ အဲဒါကို တစ်ဖက်စွန်းရောက်ပြီး ၃ရ မင်းသရဏံ ဂစာ္ဆမိ ဆိုရင်တော့ အပယ်ကို တန်းဆင်းရပါလိမ့်မယ်။
အခုနတ်ကိစ္စမှာ ကျနော်မြင်သလောက်က နတ်ကတော်များ သောင်းကျန်းလွန်းတာလို့ မြင်ပါတယ်။ ဘာသာရေးမှာ လေ့လာမှု့ အားနည်းတော့ သူတို့ လှိမ့်လုံး ခြောက်လုံးတွေကြား ဒုက္ခများကုန်ရတာပါ။ အခုဆိုရင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောတော်မူအပ်တဲ့ MP3 တရားခွေတွေကို ဘယ်ကမဆို အလွယ်တကူနာယူနိုင်ကြတဲ့ ခေတ်ရောက်နေပါပြီ။ တစ်ခြား ထေရဝါဒ ဆရာတော်ကြီးများရဲ့ တရားများကိုလည်း ထိုနည်းတူစွာပါ။ နာချင်စိတ်ရှိဖို့။ နာတတ်ဖို့။ ပဲ လိုပါတယ်။ ကျနော်ဆိုလည်း အရင်က အယူလွဲခဲ့သမျှ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ အရှင်ဇဝန မေတ္တာရှင်၊ သီတဂူ ဆရာတော်ဘုရားကြီး။ တို့ရဲ့ ဆုံးမမှု့ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စစ်စစ်ကို ရခဲ့တာပါ။ ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘဝမှာ အမှားမြင် အမှန်ပြင်နိုင်ကြပါစေ။
သိပ်အစွန်းရောက်သွားရင်တော့ ပြုတ်ကျဖို ့ရာ (တစ်ခု) ဘဲကျန်တော့တယ်။
တော်တော်လေးခံစားချက်ပြင်းထန်ပြီး ပေါက်ကွဲနေပုံရတယ်။ ထေရဝါဒဆိုတဲ့နေရာမှာ realman ဝါဒလို့အစားထိုး ထည့်ဖတ်လိုက်ရင်တော့ ကွက်တိပါပဲ။
…အိုးကရွဲ့နေလို့ စလောင်းကလေးက ရွဲ့လိ်ုက်တာပါ။ အိုးတွေ ပြန်တည့်နိုင်ကြစေဖို့ စလောင်းကလေးစောင့်နေပါတယ်။ …
သာသနာကွယ်ချိန် နောက်နှစ်ပေါင်း ၂၄၅ဝ ကျော်သွားရင်တော့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
မှန်လှပါ (the mirror looks gorgeous)။ နောက်တာနော် စိတ်မဆိုးနဲ့။ ရီးရဲမန်းဆိုတော့ လူလား ဘုန်းကြီးလား၊ ရေးတဲ့စာတွေကတော့ သာသနာ့အနွယ်ဝင်ထဲကလိုပဲ။ ထားလိုက်ပါတော့ လူလိုပဲ ရင်းရင်းနှီးနှီးပြောပါရစေ။
[အခြားကိုးကွယ်မှုတွေ အပေါ်မှာ နှိပ်ကွပ်သည့် အိမ်တွင်း အုန်းကို ပြဿနာ ရှာ၊ ရိုးရာနတ်ကိုးကွယ်မှုတွေက်ို နှိမ့်ချ၊ ဘိုးတော်တွေကို ရန်စကားပြော] အဲဒါမျိုး ရွာထဲမှာတင်ရှိတယ်။ ဘယ်သူရှိမလဲ သဂျီးလေ သဂျီး…။ ပြောပြန်ရင်လည်း ကြောင်မင်းလွန်ရာကြမယ်….။
[ခရစ်ယာန်က ဘယ်လို၊ အစ္စလာမ်က ဘယ်ပုံဆိုပြီး အတင်း ပြောပြီးမှ မိမိအယူသာ အမှန်ဟု ဇွတ်အတင်းဟောပြော၊ ရေးသားနေကြ ]
ဝေဖန်တာလွန်တော့ ပုတ်ခတ်တာ ဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်။ စည်းနဲ့ဘောင်နဲ့ ပြောဆိုနေသ၍ လက်ခံကောင်းပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာစာတတ်တွေကို ဘုရားကျောင်းတွေမှာ ဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးပြီး စနစ်တကျ လေ့လာပြင်ဆင်တယ်။ ကိုယ်ဖက်ကလည်း သူတို့လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ကို ပြန်အတုယူသင့်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဖန်ဆင်းရှင်အယူလို မရိုးရှင်းတော့ ကိုယ်ဘာကြောင့် ဗုဒ္ဓဝါဒကို သက်ဝင်ယုံကြည်ရသလဲအပြင် ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းရှင်ကို လက်မခံရသလဲ ဆိုတာပါ သိထားမှ ပြည့်စုံတယ်။ နို့မို့ရင် အထူးသဖြင့် ပြည်ပနေမျိုးဆက်သစ်များ အပြစ်ကနေ ခွင့်လွှတ်ပေးတယ်၊ ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတာနဲ့ ပျော်ပျော်နေ ရွှေဘဲတွေဖြစ်ကုန်တာပဲ…။
[နာမည်ကြီး ဓမ္မကထိကများဖြစ်ကြတဲ့ ( ဓမ္မစေတီဦးကောသလ္လ၊ ဦးသုမင်္ဂလ၊ မေတ္တာရှင် ဦးဇဝန စသည့်) တို့ကို သဘောထားသေးစွာ အပြစ်ရှာ ဝေဖန်ပြီး ] ပရဟိတလုပ်လွန်းလို့၊ သမားရိုးကျ မဆန်လို့ ဝေဖန်ခံရတယ်ထင်တယ်။ အင်တာနက်မှာ တချို့ဆရာတော်များ၊ စာတတ်များ စာအုပ်ကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီး သူများကို ပြောဆိုဝေဖန်တာတွေကို တွေ့ရလို့ စိတ်မသက်မသာဖြစ်မိတယ်။ ပညတ်သစ္စာနဲ့ ပရမတ်သစ္စာကို ယင်းဆရာတော်များ ပိုင်းခြားလက်ခံသ၍ လက်ခံကောင်းတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ရီးရဲလ်မန်းလို့ ပစ္စုပ္ပန်ဝါဒီဖြစ်လည်း ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်စရာမလို ကန့်ကွက်ဝေဖန်မှုတော့ ရှိသင့်တယ်ထင်တယ်…။
ဒီလိုဘဲ ဗုဒ္ဓ ဘာသာတွေ ခေတ်အဆက်ဆက် သူမှန် ကိုယ်မှန် ငြင်းခုံ ကြရင်း သာသနာတော် နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင့်ငါးရာကျော်ခဲ့ပါပြီ။အမှန်တကယ် စစ်မှန်တဲ့ သာသနာ ဖြစ်တော့ ခေတ်အဆက်ဆက် ငြင်းခုံနေကြပေမဲ့ သာသနာ့ အရောင်က မမှိန်ခဲ့ပါဘူး။
ပိဋကတော်ထဲမှာ ဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရား အမှန်တွေ ရှိပါတယ်။ဘယ်သူ့အာဘော်မှမပါတဲ့ ပါဠိဘာသာနဲ့ ရေးထားခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ထေရဝါဒ ဆိုတာ ဒီတရားတွေကို ဘယ်သူ့အာဘော်နဲ့မှ ပြုပြင် မခံဘဲ ထိမ်းသိမ်း လက်ခံ ရတာပါ။ ဘာသာပြန်သူတွေ ရဲ့အာဘော်ကို ငြင်းခုံတာက ထေရဝါဒ ကို ငြင်းခုံတာ မဟုတ်ဘူးလို့ မှတ်ယူပါ။ကိုယ်တိုင် သိနိုင်အောင် ကိုယ့်အာဘော်နဲ့ကိုယ် ဘာသာပြန်ပြီး ဗုဒ္ဓသာသနာကို နားလည် နိုင်ပါစေ။
အိုးရွဲ့နဲ့ စလောင်းရွဲ့ဆိုရင် ပြန်တည့်သွားပြီပေ့ါ။
ခုကြည့်ရတာ စလောင်းလေးက စောင့်နေပါတယ် ဆိုတော့ မတည့်သေးဘူးပေါ့။
အိုးနဲ့စလောင်းမှာ ဘယ်ဟာက အဓိကလဲ။ ပိုအားကြီးပါသလဲ။
အိုးကြီး ဆီကိုပဲ စလောင်းက လိုက်ရမှာလား။ စလောင်းလေးဆီကို အိုးကြီးက လိုက်လာဖို့တော့ မမျှော်လင့်သင့်ဘူးထင်တယ်။ ခါချဉ်ကောင် မာန်ကြီးလို့ တောင်ကြီး ဖြိုမယ့်ကြံ ခါးကမသန် ဆိုသလိုများ ဖြစ်နေမလားလို့ပါ။
အိုးတွေ စလောင်းတွေ အော်ဟစ်နေသေးတယ်။
သူများ ပြောချင်ရင် ကိုယ့်ဟာကို အရင်လေ့လာသုံးသပ်
ဒီဘုန်းကြီးတွေရော၊ ဒီလူတွေရော ဒီနောက်ပိုင်းမှာ တော်တော်ဆိုးလာတယ်ဗျ။ ထေရဝါဒဆိုပြီး သူတို့လုပ်တာတွေက real ပြောသလို အစွန်းရောက်လာပြီဗျ။ အဓမ္မဖော်ထုတ်တယ်ဆိုပြီး သူတို့ရဲ့ ဝမ်းတွင်းက အဓမ္မတွေပဲ ပိုပေါ်လာတယ်။ မစိုးရိမ်နံမယ် သုံးတဲ့ ဘုန်းကြီးဆိုရင် ပိုတောင်ဆိုးသေး။ ဓမ္မကထိကတွေဆို မကောင်းမြင်တဲ့ အကြည့်နဲ့ပဲ ကြည့်ပြီး စာတွေလျှောက်ရေး၊ တရားတွေခွဟောနဲ့။ ကြာတော့ ရဟန်းနဲ့ မတူတော့ဘူး။ လက်ဝှေ့သမားတွေလိုဖြစ်လာပြီ။ အဲဒီလောက် ရန်လိုနေရင်လည်း ပလ္လင်ပေါ်တက်မနေတော့။ မျှော်စင်ကျွန်းမှာ စိမ်ခေါ်ပွဲတွေလုပ်ပြီးတော့ ချကြတော့ဗျာ။ ကြာရင် ဘာသာပါ နံမယ်ပျက်တယ်။ သူ့ကိုယ်သူ ဘုရားကြနေတာပဲ။ ဒီခေတ်မှာ ဘုရားရှိနေရင်တောင် ဘုရားတောင်မှ သူတို့ဟောတာနဲ့ မတူလို့ အဓမ္မဆိုပြီး လုပ်ဦးမလား မသိ။ real ပြောတာကမှ နည်းသေး။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဒိထက်တောင်ပိုပြောသင့်တာ။ ဘယ့်နှယ့် ဘုရားထက် ကြီးတဲ့သူတွေလို ဖြစ်နေတာ။ အဲဒါတွေက ထေရဝါဒရဲ့ အမှိုက်တွေပဲ။
အခုဖြစ်တဲ့ ပြဿနာတွေဟာ တခြားလူကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်မကောင်းစွာ ပြောရရင် မိုးပြာဦးဉာဏ
ကြောင့်ပါ။ ဒါလိုပြောလို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေ ပါတယ် နာမည်တွေပါတယ်လို့ မပြောစေချင်ပါဘူး။ ဦးဉာဏဟာ ဘုရားဟောတရားတွေကို သူဉာဏ်မှီသလောက်သာ သူ ဖွင့်ဆိုမှုတွေ ပြုနိုင်မှာပါ။ ပိဋကတ်အလုံးစုံကို သူ့ဖွင့်ဆိုမှုနဲ့ အကုန်မပြီးမြောက်စေနိုင်ပါဘူး။ မပြီးမြောက်စေနိုင်တာလဲ သူဖြည့်ခဲ့တဲ့ ပါရမီအတိုင်း အတာကြောင့်ပါ။ သူဖွင့်ဆိုခဲ့တဲ့ တရားအားလုံးကို အကုန်မှားတယ်လို့ မပြောရက်သလို အကုန်မှန် တယ်လို့လဲ မထောက်ခံပါဘူး။ အကုန်မှားတယ်လို့ ပြောရင် သူ့ထဲမှာပါတဲ့ ဘုရားဟောဒေသနာတွေကို မှားတယ်လို့ စွပ်စွဲမိသွားနိုင် ပါတယ်။ မှန်တယ်လို့ အကုန်ပြောရင်လဲ အမှားကို အမှန်ဖြစ်တယ်ပြောလို့ မတရားဖြစ်ပါဦးမယ်။ မြတ်စွာဘုုရားဟာ သူ့ရဲ့ စွယ်စုံသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ ဒီသာသနာကို တည်ဆောက်ထား တာပါ။ ဘယ်လို စရိုက် ဝါသနာတွေ ပါလာသည်ဖြစ်စေ ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်အောင် ဒေသနာစဉ် များစွာနဲ့ ဖြန့်ကျက်ထားတာပါ။ ဒါဆို ဦးဉာဏမှာ ဒီလို တူညီတဲ့ ပါရမီရှိလို့လား။ မရှိပဲနဲ့ အစစအရာရာ သိသယောင် ပြောနေမယ်ဆိုရင် အနာဂတ်ကာလ လှဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်အယူအဆမှ အမှန် ထေရဝါဒအယူအဆ အမှားလို့ မလုပ်ချင်ပါနဲ့ ။ အားလုံးဟာ တူညီတဲ့စရိုက်သဘာဝတွေက လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ထေရဝါဒမှာလည်း ကိလေသာငြိမ်းမှုကိုပဲ ဦးတည်ပြီး လုပ်နေတာပါ။ လိုရင်းက ပယ်ရမယ့်ကိလေသာကို မပွားဖို့ အဓိကမဟုတ်လား။ ပွားရမှာကို မပယ်ဖို့ မဟုတ်လား။ တရားက ရှင်းပါတယ်။ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ကြပါ။ ကိုယ့်ကိလေသာ ကိုယ်ပယ် နိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါ။ အပြတ် အပြတ်နဲ့ နှာခေါင်းသွေး ထွက်မနေပါနဲ့တော့။ အားလုံးဟာ ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ ဖခင်မြတ်အောက်က သားသမီးတွေပါ။ အချင်းချင်းတွေ ရန်မဖြစ်ပါနဲ့တော့။ အိမ်ကြက်ချင်း အိုးမဲ သုတ်ခွပ်နေတာတွေဟာ ဘာအကျိုးများမတုန်း။ ဒီလိုမှ စေ့စပ်မရရင်လဲ အားလုံး အကြောင်းအကျိုးပဲပေါ့။ သူ့လမ်းသူသွား ကိုယ့်လမ်း ကိုယ်သွားပဲပေါ့။ အပြင်ငြိမ်းချမ်းမှုထက် အတွင်းငြိမ်းချမ်းမှုက အဓိကပါ။ ပရဟိတ ဆိုတဲ့ စကားလုံးတပ်ပြီး အပြင်ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက် သွေးဆာတဲ့တိုက်ပွဲသံတွေ မဖြစ်ပါစေနဲ့။ အတွင်းငြိမ်းချမ်းမှုကို ဦးတည်ပြီး လုပ်ကြဖို့ ပိုအချိန်တန်ပါပြီ။ အားလုံးကို မိမိဉာဏ်မှီရာရာဖြင့် ကျေးဇူးပြုတာပါ။ အမှားအယွင်း ရှိရင်လဲ အားလုံးကို ဝန္ဒာမိပါပဲ … ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ….
Realone ကလည်း ထစ်ခနဲရှိ မိုးပြာဆရာတော်ဦးဉာဏကိုပဲ စွဲထည့်နေပါလား။ ဒါဆိုရင် ကိုယ့်လူလည်း realman ရေးသလို ဘုန်းကြီးရမ်းကား (မစိုးရိမ်စာသင်သား အမည်ခံ ဦးဣဿာမစ္ဆရိယဘိလံသ) နောက်က လိုက်နေတဲ့ လူရမ်းကားတွေထဲက ဖြစ်လိမ့်မယ်နဲ့ တူတယ်။ ဘုရားဟောတရားတွေကို ပြန်ဖွင့်ကြတဲ့ အဋ္ဌကထာ(အဖွင့်ကျမ်း)တွေဆိုတာ ဘုရားမရှိတော့တဲ့ နောက် နှစ်ထောင်ချီကြာမှ ပေါ်လာတာတွေပါ။ ဒီအဋ္ဌကထာတွေလည်း သူတို့ စိတ်ကူးနဲ့ ဉာဏ်မှီသလောက်ဖွင့်ခဲ့တာမို့ မပြည့်စုံနိုင်သလို ဒီခေတ်မှာ ဒီအဖွင့်တွေဟာ အဓိပ္ပါယ်လဲ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒီအဋ္ဌကထာဖွင့်ဆိုချက်တွေကို ဘုန်းကြီးရမ်းကားတို့လို အသေဆုတ်ကိုင်ထားမယ်ဆိုရင် ထေရဝါဒဟာ ဒီအစွန်းရောက်တွေကြောင့် မတွေးဝံ့စရာပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ခေတ်အားလျှော်စွာ လိုအပ်လို့ မိုးပြာဆရာတော်ဦးဉာဏလို ပြန်ဖွင့်ပေးနိုင်တဲ့ ပညာရှင် ပေါ်လာတာလို့ ဝမ်းသာပေးစမ်းပါ။ ဒါလည်း ပါရမီလို့ ဆိုရတဲ့ အရည်အသွေးရှိလို့ ပြန်ဖွင့်နိုင်တာပေါ့။ သိဟိုဠ်ခေတ်က ဖွင့်ခဲ့တဲ့ အဋ္ဌကထာတွေကို ဘုရားဟောနဲ့ ထပ်တူပဲလို့ ယူနေကြဦးမယ်ဆိုရင်တော့ အနာဂတ်ကမ္ဘာ့လူသားတွေရဲ့ လှောင်ပြောင်ခြင်းကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ခံရပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဗုဒြ္ဓမတ်စွာသာသနာ ဆက်လက် တည်တံ့နိုင်ဖို့ ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော် (အများအခေါ် မိုးပြာဆရာတော်) ဦးဉာဏလို ပညာရှင် ငါတို့ နိုင်ငံက ပေါ်ထွက်ပါလားလို့ ရဲရဲကြီး ဂုဏ်ယူလိုက်စမ်းပါ။ လေ့လာလို့ရအောင် http://www.ariyadhamma.multiply.com လိပ်စာကို ညွှန်လိုက်ပါတယ်။ ဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားအပေါ်မှာ သိဟိုဠ်ခေတ်က ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖွင့်ခဲ့တာနဲ့ ဒီခေတ် ပညာရှင်တွေ ဖွင့်ဆိုတာ နှိုင်ယှဉ်ပြီးလေ့လာကြည့်ပေါ့။ ဘယ်ဟာက ဗုဒ္ဓအလိုနဲ့ နီး မနီးဆိုတာ . . . . ။
အတို့ မခံပါလား kosicca realman တို့ရေ။ ဗူးပေါ်သလို လယ်ပြင်မှာဆင်သွားသလို အထင်းသားကြီးပါလား။ ငါတို့ဟာ မိုးပြာရဲ့ နောက်လိုက်တွေပါလားလို့ ကြွေးကြော်တော့ စာဖတ်သူအပေါင်းလဲ ဒီစာတွေရဲ့ စကားသွား စကားလာတွေဟာ မိုးပြာဆရာတော်ရဲ့ အရိပ်မည်းကြီးအောက်မှ လှုပ်ရှားနေပါလားလို့ သတိမြဲမြဲချပ်ပြီး ရှောင်ကြဉ်ကြပါကုန်။ လူမိုက်ဆိုလျှင် ရှောင်သွေလွဲလို့ မမှီဝဲနဲ့ ကင်းအောင်နေဆိုတဲ့ မင်္ဂလာ တရားတော်အတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးကြပါကုန်။ ဆရာတင်မှားရင် တစ်သံသရာလုံး မှောက်မယ်ဆိုတာ မတွေးခဲ့ကြဘူးထင်ပါရဲ့။ ဒေဝဒတ်ရဲ့ နောက်လိုက်တွေဟာ နောက်ဆုံးတော့ သူတို့သွားမယ့်လမ်းကို အကောင်းလို့ပဲ ထင်နေသလား မသိ။ အားလုံးဟာ အကြောင်းအကျိုးပါပဲ မိုးပြာရေ။
kosicca ကလည်း ထစ်ခနဲရှိ ထေရဒါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုပဲ စွဲထည့်နေပါလား။ ဒါဆိုရင် ကိုယ့်လူလည်း Realsone ရေးသလို ဘုန်းကြီးရမ်းကား ( ဦးဉာဏ) နောက်က လိုက်နေတဲ့ လူရမ်းကားတွေထဲက ဖြစ်လိမ့်မယ်နဲ့ တူတယ်။ဒီအဋ္ဌကထာဖွင့်ဆိုချက်တွေကို ဘုန်းကြီးရမ်းကားတို့လို မျက်စိမှိတ်ပြီးဇွတ်ငြင်းမယ်ဆိုရင်မိုးပြာ ဒီအစွန်းရောက်တွေကြောင့် မတွေးဝံ့စရာပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ဗုဒြ္ဓမတ်စွာသာသနာ ဆက်လက် တည်တံ့နိုင်ဖို့ (မိုးပြာဆရာတော်) ဦးဉာဏလို မိစ္ဆာဒိဌိပညာရှင် ငါတို့ နိုင်ငံက ပေါ်ထွက်ပါလားလို့ ရဲရဲဆန့်ကျင် လိုက်စမ်းပါ။ လေ့လာလို့ရအောင် http://www.dhammadownload.com/Dr-Nandamalabhivamsa-mp3-myanmar.htmလိပ်စာကို ညွှန်လိုက်ပါတယ်။ ဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားအပေါ်မှာ သိဟိုဠ်ခေတ်က ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖွင့်ခဲ့တာနဲ့ ဒီခေတ် မိစာ္ဆဒိဌိပညာရှင်တွေ ဖွင့်ဆိုတာ နှိုင်ယှဉ်ပြီးလေ့လာကြည့်ပေါ့။ ဘယ်ဟာက ဗုဒ္ဓအလိုနဲ့ နီး မနီးဆိုတာ . . . . ။
အင်း ဘယ်သူမပြု မိမိမှုတဲ့။ အဲဒီတော့ နံပါတ်(၁) မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင်နေထိုင်ပြုလုပ်ပြောဆိုဖို့က အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို နံပါတ်(၁)နှင့်ပြည့်စုံမှ ကျန်တဲ့နံပါတ်တွေကို ပြုလုပ်ကြပါကုန်။
အစွန်းရောက်ထေရဝါဒီလို့ စွပ်စွဲထားတဲ့ ဆရာတော်များထဲက အချို့ဆရာတော်တွေကို မိမိသိပါတယ်။ အဲဒီဆရာတော်တွေကို အကြံပြုလျှောက်ထားချင်တာက ဆရာတော်တို့ဟာ အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာတွေကို အသေဆုတ်ကိုင်ထားပြီး အဋ္ဌကထာ ဋီကာတွေရဲ့ အဆိုအမိန့်တွေကို အမှန်တရားအဖြစ် ကိုးကွယ်နေသမျှ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ မလွယ်လှပါဘူးဘုရား။ တစ်ကျမ်းနဲ့ တစ်ကျမ်းတောင် ဖွင့်ဆိုပုံခြင်း မတူကြလေတော့ ဒါတွေကို တစ်ထစ်ချ ယုံစားထားဖို့ မသင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်ဘုရား။ ဆရာတော်များ ရှာလို့ ဖွေလို့ ရမယ်ဆိုရင် ဆရာတော် အရှင်အာဒိစ္စဝံသ (ဘိက္ခုနီသာသနောပဒေသကျမ်းပြု) ရေးသားသွား တဲ့ မူလပဏ္ဏာသ မြန်မာပြန် တို့၊ ဒက္ခိဏဝိဘင်္ဂသုတ်မြန်မာပြန်တို့၊ နိဗ္ဗာနသုတ္တသင်္ဂဟ တို့လို စာအုပ်မျိုးတွေ ကို ဖတ်ရှု့လေ့လာဖို့ အကြံပြုလျှောက်ထားလိုပါတယ် ဘုရား။ အဋ္ဌကထာ ဋီကာတွေရဲ့ လွဲချော်ချက်တွေ ကို အကွင်းသား မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဘုရား။ ပါဠိတော်ထဲမှာတောင် နောက်ပိုင်းကျမှ ထိုးထည့်ထားတာတွေကို ဆရာတော်ကြီးက ထောက်ပြထားပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်လည်း ပိဋကတ်ပါဠိအဋ္ဌကထာဋီကာတွေကို ဆရာမြတ်များထံမှာ သင်ယူဆည်းပူးခဲ့ပါတယ်ဘုရား။ ဒါပေမဲ့ တပည့်တော်က အဋ္ဌကထာ ဋီကာတွေကို ကိုးကွယ်ရာ အဖြစ်တော့ မမှတ်ယူပါဘုရား။ အာဘော်ငုပ်နေရာမှာ ဖော်ပေးတဲ့ အဓိပ္ပာယ် မရှင်းရာမှာ တတ်နိုင်သမျှ ရှင်းပြပေးကြတဲ့ ကျေးဇူးရှင်ကြီးများ အဖြစ်သာ သဘောထားပါတယ်ဘုရား။ အရှင်ဘုရားများ ရေးသားနေတဲ့ စာတွေထဲမှာ ဒါတွေကိုဘဲ ကိုးကားပြီး ရေးနေကြလေတော့ တပည့်တော်အတွက်တော့ ပြောရမယ်ဆိုရင် မတိုးပါဘုရား။ အဋ္ဌကထာ ဋီကာကို ကျော်ပြီး ဘုရားအာဘော်ကို ဖော်နိုင်ကြပါစေလို့ပဲ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ဘုရား။
ကိုယ့်စည်းကျိုးလို့ လူဆိုးဝင်တာ …!!!!!!
တကယ်တော့ (ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့) ဉာဏ် ရော –
(ပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့) ပညာရော –
(လေ့လာနှံ့စပ် သိမှတ်ခြင်းဆိုတဲ့) ဗဟုသုတရော –
မနည်းမနောပြည့်စုံတဲ့ရဟန်းတော်တွေ ယခင်ကလဲ အများအပြားပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
ခက်တာက သူတို့အများစုက ကိုယ့်ကျောင်းကန် ကိုယ့်ဓမ္မာရုံထက် ကျော်ပြီး – သာသနာတော်အရေးကို အာရုံစိုက်မှု့ အားနည်းတယ်။ စေတနာနဲတယ်လို့ စွပ်စွဲချင်ပါတယ်။ တာဝန်မကျေကြဘူးလို့တောင် ပြောချင်ပါတယ်။ သာသနာတော်ရဲ့ဘေးရန်ကို ကြိုကြည့် ကြိုမြင် ကြိုကာကွယ်ရမှာ။
ဒါကြောင့်လဲ ဗုဒ္ဓအလိုကျ နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ ဗုုဒ္ဓဝါဒနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ အယူ၊ အပြော၊ ယုံကြည်မှု့၊ ဓလေ့ထုံးစံတွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာအရေခြုံပြီးတော့တောင်မှ လူထုကြား ပြည်သူကြားထဲ ခေတ်အဆက်ဆက် ပျံ့နှံ့ အမြစ်တွယ်ကုန်တော့တယ်။
ပြီးတော့ သာသနာတော်တွင်းက တပြည့် ဒကာဒကာမများကိုလဲ သဒ္ဓါကိုတိုးပွားစေဘို့သာ ဆုံးမကြတာများပြီး ပညာကို တိုးပွားစေဘို့ ဆုံးမသွန်သင်တာ နဲတယ်။ အလွန့်အလွန် နဲတယ်။ ဥပမာ- ဒါန အမှု့လောက်ကိုသာ အလွန်အမင်း အမွှန်းတင်ဟောကြသလောက်၊ သီလအမှု့ကိုတော့ အသေအချာ ပိုင်းခြား တိုက်တွန်းဟောပြမှု့ နဲတယ်။(ဘုန်းကြီးတွေလဲ ဝိနည်းအကုန်မညီနိုင်တော့တာ ကြောင့်လဲပါသပေါ့)။ ဘယ်လိုအချင်းအရာဟာဖြင့် ဗုဒ္ဓအဆုံးအမ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ တွေးခေါ်ယုံကြည်မှု့နဲ့ ကိုက်သည်မကိုက်သည်ကို ရှင်းလင်းပိုင်းခြား ဟောပြခြင်းမျိုးနဲတယ်။
အကျိုးဆက်အားဖြင့် ပြည်သူတွေက ဘာကိုဘယ်လို တွေးခေါ် လက်ခံ ကြည်ညို ယုံကြည်ရမှန်း မသိတော့ ရှိရှိသမျှ တွေ့တွေ့သမျှ အကုန်ယုံကြည်လိုက်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာထဲ ကောက်ထည့်ခဲ့ကြတယ်။
အဲဒါရဲ့သက်သေကတော့ ရွှေတိဂုံ နဲ့ မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်ဘုရားကြီး အပါအဝင် ဘုရားမှန်သမျှသာ သွားကြည့်လိုက်တော့။ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပါတ်သက်တာဆိုလို့ ဘုရားစေတီသို့မဟုတ် ဆင်းတုတော် တော့ရှိပါတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ (ဂြိုလ်တိုင်တွေ၊ အကောင်တွေ အောင်မြေတွေ နတ်ကွန်းတွေ အပါအဝင်) အကုန် သူများဟာတွေချည်းပဲ။
အဟင်းဟင်း…ကျီးသဲလေးထပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကောင်းမှု့ကြောင့် ခေတ်စားသွားတဲ့ ရှင်ဥပဂုတ်ရောပေါ့။
အဲဒီလောက် ကိုယ်ခံအားနည်းမှဖြင့် မိုးပြာ ဆိုတော့လဲ ပြာလိုက်ကြပေါ့ ကွယ်ရို့ …။
တနေ့ မိုးခရမ်းရောင်ဆိုပြီး ပေါ်လာရင်လဲ လိုက်သာ ရမ်းလိုက်ကြပေတော့ …။
သင်ရော — ဘယ်လိုလဲ????
ဘာသာတရားရဲ့ လောင်းရိပ်အောက်က ဘာသာတရားတိုင်းက ဘာသာဝင်တွေ လွတ်မြောက်ကြပါစေ
ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်က ဘာကိုလိုလားလို့ ပွင့်တော်မူရပါလဲ၊ ဘယ်အရာကို လိုလားတော်မူလို့ ပါရမီတော်များကို ဆင်းရဲခံဖြည့်ကျင်တော်မူခဲ့တာပါလဲ။ အဲဒါကို သိကြရင်တော့ ဘာမှ မပြောဘဲ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ကာ ထွက်ရပ်လမ်းကို အမှန်ရောက်နိုင်ကြမှာပါ။ ရောက်နိုင်တဲ့ အကျင့်မြတ်ကို ဘုရားရှင်ကဆောင်ယူပေးသနားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ရတနာသုံးပါးကျေးဇူးကို ဆင်ခြင်ပြီး၊ ကျွန်တော်တို့က ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကို အကျင့်မြတ်နဲ့ ပူဇော်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တာမဟုတ်ပါ။ ကိလေသာအနာပျောက်ဖို့ အဓီကပါလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။